Anodiwa John Tsamba angadai akave Akanaka, Google! | Martech Zone
Chitatu, October 27, 2010 Chitatu, October 29, 2014 Douglas Karr
Vhiki rino, yedu Corporate Kubhuroka kweDummies ' saiti yakanyangarika kubva paGoogle.
Ndakanga ndisingadi kuita chero chinhu chinotyisa, saka ndakamirira zuva. Kufema kwakadzama. Kunyange zvakadaro hapana.
Ndipo pandakanongedzerwa kuchinyorwa icho Google inogona kunge ichiita kuyedza uye shanduko yealgorithm inogona kunge iri pakona. Mamwe mawebhusaiti akange aona shanduko dzakakura munzvimbo yavo.
Nesimba guru kunouya basa guru. Ndinoziva chingori chirevo kubva mufirimu, asi geez Google. Zvakaipa zvakakwana ini ndinoona nzvimbo dzangu dzichisimuka uye dzichidonha, dzichinetseka kuti ndione zvinoitika, kuita shanduko, kuzvichengeta zvakakurumbira uye kuverengerwa mushe. Sezvo bhuku rangu richisimbisa yekutsvagisa injini, zvinongotendeseka kuti saiti yangu inopfuura vamwe. Mune mamwe mazwi, kubudirira kwangu kunoenderana nekugadzikana kwako uye nemhando yetraffic yakakodzera iwe yaunofamba nenzira yangu.
Muchidimbu, Google, isu tiri mune inorema hukama pano. Ndinokuda. Ndinoita zvese zvaunokumbira… ndigadzirise saiti yangu, kunyoresa neWebmasters, shandisa mazwi akakosha zvinobudirira. Hapana chandinoita asi ndinokufadzai mazuva ese… ndichipa vashanyi venyu matani nematoni ezvinyorwa zvekunongedzera. Chii chandinowana mukudzoka?
Pasina zvakanyanya sekunyora.
Kunyangwe ini ndaive ndisina chero ziviso muWebmasters, ini ndakamboita tweaking kune saiti uye ndokumbira kukumbirwazve chikumbiro. Chinhu chega chandakawana chaigona kundipinza munyatwa raive izwi rakakosha mumusoro rakanga risina kuratidzwa (chifananidzo chaive munzvimbo yacho)… saka ndakaibvisa. Handifunge kuti zvinokwana kuti undisiye, asi ndiani anoziva. Hamungandiudze.
Nhasi, ndiri kufara kuona kuti isu tadzoka pachinzvimbo. Sezvineiwo, ini handisi chinzvimbo chevane gumi kana mamwe mazwi akanyanya andaimbove, asi ini ndiri chinzvimbo # 1 yeCorporate Blogging yevaDummies - pamberi peAmazon naWiley. Handina kufunga kuti izvi zvaigona kupihwa mukurumbira uye backlinks ... asi hei Ndichatora chandingawana.
Mushure mezvose, ini handisati ndagadzirira kuputsa, Google Thanks nekuchengeta. Inotevera nguva ndisiyei Anodiwa John tsamba, zvakadaro. Ndicho chidiki chaungaite pane zvese zvandakaisa mari muhukama uhu.
Tags: de-indexedgoogle webmastersGoogle +search engine marketingseo
Nyora Zvino Indy
Gumiguru 27, 2010 pa 8:36 AM
Yakakura posvo Doug. Kugadzira kwazvo. Muchokwadi ndakanyora tsamba yakafanana kuna DirecTV mwedzi mishoma kumashure, chete ini ndini ndakadambura hukama (ini ndakanga ndisisakwanise kuwana satellite satellite). http://writenowindy.blogspot.com/2010/08/i-want-you-back-too-directv-but-we-just.html
Mutsamba wetsamba inzira huru yekuratidzira hukama hwehukama mabhizinesi avanogona kuva nawo nevatengi / vashandisi.
Gumiguru 27, 2010 pa 9:14 AM
Ini ndinofunga yaive injini yekutsvaga nyika yakamhan'arira Google yanga ichiita glitchity (hauna nhengo yeprimiyamu kuti uverenge zvakadzama pane yavo blog). Izvo zvakangozviita sekondi yapfuura.
Uye inotevera nguva, tarisa iyo izere peji imwe serps saka yangu diki pre-ongororo inoratidza kumusoro 😛 JK.
Cherechedzo kune wega - tanga offsite kugadzirisa yangu pre-ongororo (pakupedzisira)
PS - kudzoka kweiyo Google Dhanzi?
Gumiguru 27, 2010 na12: 47 PM
Ndakawedzera peji nyowani pane yangu mepu, hapana shanduko chero kune akati wandei vamwe gumi, uye ivo vakandikanda ini 3 mavara kwemazuva mashoma vasati vadzora zvishoma nezvishoma vachindidzosera kwandakatanga. Kusavimba, methinks.
Gumiguru 28, 2010 pa 8:13 AM
Izvi zvinongonongedza dambudziko nekuisa ese emazai ako mune iyo SEO tswanda. Ndinoyeuka ndichiita nharo nemumwe mukomana makore mashoma apfuura akati ndanga ndichipa vanhu kuraira kwakaipa pandakavaudza kuti vanofanira kutenga kushambadza, mabhizimusi ekutengesa, uye kuita zvimwe zvese izvo zvatinoita kuti tiwane traffic kunze kwekuvimba nemajini ekutsvaga. apo zvese zvavaifanira kuita kudzidza SEO. Akazvishandisa semuenzaniso nekuti aizvitora semudzidzisi weSEO uye akaita mazana mashoma pagore kubva kune mashoma ecommerce masaiti uye akawana traffic yake yese kubva kunjini dzekutsvaga uye mazhinji acho kubva kuGoogle. Mwedzi mishoma gare gare Google yakatamba, chinzvimbo chake chakanyangarika uye bhizinesi rake rakazara.
Ndokumbira utarise kuti ini handisi kureva kuti iwe unovimba chete paSEO, asi kune vanhu vazhinji vanoita.
Gumiguru 28, 2010 pa 8:35 AM
Musi waOct 28, 2010 9:18 AM, "Echo"
Gumiguru 28, 2010 na7: 51 PM
Hugh, ini handina kukwanisa kubvuma zvimwe. Hapana bhizinesi rinofanirwa kuve nehurongwa hwekutora!
Gumiguru 29, 2010 pa 6:38 AM
Pandinofunga kuti makore apfuura Microsoft yakamhan'arwa kuti ibhandure Explorer neWindows. Yakawandisa simba vakati ipapo…
Nguva dzakasiyana, kufunga kwakasiyana ndinofungidzira
Gumiguru 29, 2010 pa 7:37 AM
Jacques, zvakanaka kunzwa kubva kwauri, changamire! Hongu, ndinobvumirana zvachose. Isu parizvino tine shanduko munyika dzese kudzivirira mabhengi nemakambani emakadhi echikwereti kuviga bhizinesi… asi isu tinobvumidza kuzvitonga kuzere seGoogle kumira nekumisikidza makambani kubva pane yavo yekutsvaga injini. Isu tinoshanda nemakambani uko shanduko muGoogle algorithm inogona kutamisa pamwedzi mari nemazana ezviuru zvemadhora. Ini handinei nazvo kana zvakafanira… asi kugona kwekungodonhedza munhu pasina chikonzero kunogona kuita kuti vanhu vadzingwe basa uye vakuvadze mabhizinesi zvakanyanya!